B2C CRM dia manakiana ny orinasa miatrika mpanjifa | Martech Zone
B2C CRM dia manakiana ny orinasa miatrika mpanjifa
Talata, Aogositra 25, 2015 Talata, Aogositra 25, 2015 David Trice
Ireo mpanjifa eo amin'ny tsena ankehitriny dia matanjaka kokoa noho ny teo aloha, mitady fotoana mavitrika hifaneraserana amin'ireo orinasa sy marika. Ny fifandimbiasam-pahefana goavambe ho an'ny mpanjifa dia nitranga haingana ary namela ny ankamaroan'ny orinasa tsy ampy fitaovana mba hampiasa ireo vaovao vaovao natombok'ireo mpanjifa tamin'ny fomba vaovao.
Na dia saika ny raharaham-barotra be mpampiasa rehetra aza dia mampiasa vahaolana CRM hitantanana ny mpanjifa sy ny vinavinany, ny ankamaroan'izy ireo dia mifototra amin'ny teknolojia efa am-polony taona maro - ary natao hamahana ny varotra B2B indrindra izy ireo. Ny ankamaroan'ny orinasa dia miankina amin'ny rakitsoratry ny mpanjifa tsy mitovy ao anatin'ny sehatra POS, eCommerce, na Marketing izay tsy mifampizara data. Namboarina hanohanana ilay maodely taloha misy ny fiantsenana miasa be indrindra, ireo vahaolana ireo dia tsy afaka manome sary feno an'ireo mpanjifa maoderina rehefa miditra sy mivoaka ny fantsom-pivarotana imbetsaka izy ireo, amin'ny fantsona samihafa sy ireo faritra samihafa alohan'ny hiovany.
Ny fehiny dia ny rafitra miasa sy CRM mifototra amin'ny fitondran-tena taloha dia tsy mandaitra amin'ny fitantanana mpanjifa maoderina. Ny faharanitan-tsaina omen'izy ireo dia miraikitra amin'ny silos, tafasaraka amin'izay ianarana amin'ny alàlan'ny fantsona hafa sy ny fifandraisana; manakana azy tsy hampiditra data vaovao ho an'ny mpanjifa izany amin'ny fotoana tena izy handokoana ny sary marina momba ny dia fivarotana vaovao, izay sady sarotra no tsy mandeha amin'ny làlana.
Io no nanosika ahy hamorona ENGAGE.cx, karazana CRM vaovao tanteraka izay natsangana avy any ifotony mba hahafahan'ny orinasa mahalala sy manangana fifandraisana amin'ireo mpanjifany. Teraka tao anaty rahona, ity sehatra ity dia mianatra ny fihetsiky ny mpanjifa ary mizara angon-drakitra manerana ny fantsona rehetra, eny fa na dia ny media sosialy aza, miaraka amin'ny tanjona hanomezana faharanitan-tsaina mahatalanjona amin'ny mpanjifa izay zava-dehibe indrindra: fifanatonana iray eo amin'ny samy mpiasa sy ny mpanjifa.
B2C CRM no iantsoako azy.
Fa maninona B2C CRM?
Ao amin'ny ENGAGE.cx, hainay izany Ny 80% ny tombom-barotrao dia atolotry ny 20% ny mpanjifanao.
Alao an-tsaina ny fambolena fifandraisana matanjaka kokoa amin'ireo mpanjifa ireo amin'ny alàlan'ny fikirakirana ny fifandraisana toa ny fisakaizanao; mifankahafantatra sy mahatakatra ny fomba tsara indrindra hifandraisana ao anatin'ny toe-javatra isan-karazany ifaneraseranao:
Ny resadresaka ataonao amin'ny namanao dia mifototra amin'ny tantara nozaraina, ary hainao tsara ny mandinika ny toe-javatra misy anao rehefa mifampiresaka.
Rehefa miantso izy ireo, mandefa hafatra, mi-tweet, dia fantatrao hoe iza izy ireo - ny soatoaviny, ny hetahetany ary ny zavatra ilainy.
Rehefa mandefa atiny anao izy ireo, dia misy ifandraisany foana satria fantatr'izy ireo hoe iza ianao.
Rehefa miseho ao an-tranonao izy ireo dia hainao ny mampiala voly azy ireo, ary mety ho azonao omena azy ireo ny zava-pisotro tiany indrindra.
Amin'ny fampiharana an'io fahatsiarovan-tena io amin'ny orinasanao dia irinao ny CRM hanana fahaiza-manao fa tsy hanohana an'ity karazana fifandraisan'ny mpanjifa vaovao ity fa hanampy amin'ny fananganana vaovao. Ny CRM nentim-paharazana dia sembana satria ny fahalalany dia tsy voafetra ho an'ireo toe-javatra sy fampifandraisana izay namboarina hikirakira azy ihany.
Ny B2C CRM vaovao anao dia hahafantatra ny fiovan'ny mpanjifanao mandritra ny dia mividy ary ny Relationship Cloud® dia mampahafantatra sy manome hery ny mpiasa amin'ny faharanitan-tsain'ny mpanjifa mifandraika amin'izany.
Fanavaozana B2C CRM: Fahalalana momba ny fitsangatsanganana ho an'ny mpanjifa
Ny Fifandraisanay Cloud dia manome fahitana, fahitana ary toe-javatra manodidina ny toerana misy ny mpanjifanao amin'ny diany manokana. Izany dia ahafahan'ny orinasa mianatra ny fomba tsara indrindra hampifandraisana ny mpanjifa amin'ny fotoana sy toerana tsirairay amin'ny teny hoe mpanjifa - manerana ny fantsona, media ary toerana rehetra. Rehefa mandeha ny fotoana dia manamboatra fandaharam-potoana maharitra andavan'andro ho an'ny mpanjifa tsirairay izahay izay manome ny ambaratongam-pitsikilovana mbola tsy nisy toy izany izay azo ampiharina amin'ny mpanjifa tsirairay na ho an'olona mividy mialoha.
Fanavaozana B2C CRM: Fanamafisana ny mpiasa
Ny mpiasa dia eo amin'ny laharana voalohany amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa ary matetika no singa manakiana indrindra amin'ny fananganana fifandraisana ary miteraka tsy fivadihana. Ny CRM nentim-paharazana dia tsy afaka manome hery azy ireo amin'ny fampahalalana ilainy amin'izao fotoana izao hanatsarana ny fifandraisan'ny mpanjifa tsirairay. Ny Fifandraisana Cloud dia namboarina manokana manodidina ny fanomezana ho an'ny mpiasa RIGHT ny angon-drakitra mpanjifa RELEVANT isaky ny dingana amin'ny dia. Hevero ho fampandrenesana ara-psikolojika ho an'ny mpanjifa tsirairay fa ny mpiasa dia afaka manararaotra hitarika ny fifandraisana.
B2C CRM Fanavaozana: Hakingana amin'ny sehatra
Ireo mpamatsy CRM nentim-paharazana dia nanomboka nanangana indray ny tolotra nataony manodidina ny traikefan'ny mpanjifa, saingy amin'ny ankapobeny dia miorina amin'ny hazondamosina B20B CRM 2 taona izy ireo na fitambaran'ny fividianana maro izay nozairina niaraka. Na ny scenario dia tsy mamorona ny hakingana na ny fandraisana andraikitra ilaina hamahana ny fitakian'ny mpanjifa ankehitriny. Ny Relationship Cloud dia manamboatra ny faharanitan-tsaina amin'ny fotoana tena izy ary miha maranitra amin'ny lafiny rehetra amin'ny alàlan'ny fanodinana sy famakafakana ny fitondran-tena sy ny fivelaran'ny fiainana maharitra.
Betsaka ny vahaolana CRM any izay miady amin'ny tsenan'ny B2C, fa raha tsy hoe namboarina mba hanomezana fifandraisana manokana amin'ny mpanjifa amin'ny ambaratonga dia azo antsoina hoe B2C ve ny sehatra? Ny mpanjifa ankehitriny dia noana tsy takatra; mangetaheta izy ireo ary mamaly azy. Amin'ny alàlan'ny fampiharana ny CRB CRM tena izy ao anaty haitao misy azy ireo, ny orinasa dia afaka mamorona fifandraisana manintona sy manovaova bebe kokoa amin'ny mpanjifa, ary izany no mampiavaka ny mpifaninana sy mpiorina fahombiazana maharitra
Azonao atao ny mianatra momba ny singa fototra ao amin'ny B2C CRM sy ny fomba fampiroboroboana ny traikefan'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fijerena ny whitepaper anay, Maninona ny mpanjifa miatrika orinasa no mila B2C CRM. Satria fantatray fa mino ny mahita, dia azonao atao koa ny mandahatra fotoana manokana Demo eto.
Tags: b2cCRMfifandraisana amin'ny mpanjifaENGAGE.cx
David Trice dia mpiara-manorina sy CEO an'ny ENGAGE.cx, ny CRM mitarika traikefa mitarika ho an'ny orinasa. Talohan'ny fandefasana ENGAGE.cx Trice dia VP an'ny CRM tao Oracle, izay nitarihany ny fandefasana ny Oracle's Fusion CRM.
Viraltag: Mahita, mandamina, mampiofana, mizara ary manara-maso ny sary an-tserasera